लगानी कर्ताले ४० हजार तिर्छन तर विष्णु माझिको मुख देख्न पाउँदैनन् ! | रिपोर्टर्स नेपाल
२०७६ असार १२ बिहीबार, ०६:४३
२०७५ पुष २१ गते प्रकाशित, l ११:४१
काठमाडौ, २१ पुस । कुनै बेला सांगीतीक क्षेत्रमा बिष्णु माझीको आगमन हुँदा निक्कै हलचल भयो । उनले स्वर दिएका हजारौं गीतले चर्चाको सिखर चुमे । दर्शक कमाए । स्याङ्जा चापाकोट नगरपालिका रत्नपुर दामाचौर नजिकै माडीमा जन्मिएकी लोक दोहोरी गायिका विष्णु माझीको बारेमा अहिले अनेकौं प्रसङ्गहरु जोडिएको देखिन्छ भने सर्वत्र गायिका विष्णु माझिलाई सार्वजनिक गर्न जोडदार माग उठ्न थालेका छन् ।
तर बिडम्बना उनीसंगै यस लोक तथा दोहोरी क्षेत्रमा भित्रिएकी गायिकाहरुको स्थिति कहाँ छन् रु के गर्दैछन् रु भन्ने बारेमा थाह पाउनको लागि समाचारनै बनाउँनुपर्छ । नत्र सम्भव छैन् । आज उनीहरु गाउँमा छिन् । घरबार चलाईरहेकी छिन् । अक्कल झुक्कल गीत गाउछन् । कहिले कही कार्यक्रममा पनि हिड्छन् । उनीहरुका बिरलै गीत सुन्न पाईन्छन । तर गायिका माझिका प्रत्येक दिन एक न एक गीत बजारमा आईरहेका छन् । बजार कब्जा गरिरहेका छन् भन्ने कुरामा विमति नहोला ।
चर्चित गायिका बिमा कुमारी दुरा, शर्मिला गुरुङ, लक्ष्मि न्यौपाने, त्यस पछि राधिका हमाल, देवि घर्ती, टिका पुन, मुना थापा लगायत नामहरु केही नाम उनी भन्दापछि र कुनै नाम उनी भन्दा पहिले सुनिएका नाम हुने भने केही नामहरु उनीसँग जोडिएर आउने नाम हुन। माथि उल्लेखित नामहरु आजको दिनमा संसारमा छरिएर रहेका नेपाली दर्शककोबीचमा दोहोरिएर कार्यक्रममा उपस्थिति जनाई सकेका नाम पनि हुन।
केही बर्षदेखि गायिका विष्णु माझी श्रीमान सुन्दरमणी अधिकारीले नजर बन्दमा छन भनेर हल्ला गरिदैछ । आजभोलि गायिका विष्णु माझिको नामलाई बिस्तारै नजर बन्द र ४० हजारको उपमा दिन थालिएको छ । उनले एउटा लोक दोहोरी गीत गाएको ४० हजार रुपैया लिन्छन् भन्ने गरिन्छ । एक वर्ष पहिले मात्रै २० हजार, ३० हजार यस्तै सुनिथ्यो ।
जुन नेपाली गीत संगीतको इतिहासमा एउटा गीत स्टुडियोमा गाएको भरमा ४० हजार अहिलेसम्म कुनै पनि गायिकाले लिने गरेका छैनन् । ४० हजार लिनुलाई अच्चम्म मान्नुपर्ने कारण मैले चाँही देख्दीन । किन कि परिश्रम गरे वापत यति लिन्छु भन्न पाउने हर कोहीमा यो अधिकार छ र हुन्छ पनि ।
यहाँ अच्चम्म लाग्ने कुरा फरक छ । जुन कुरालाई सम्झिदा अन्याय पनि लाग्छ सक्छ ।आन्तरिक तथा सत्य के हो भन्ने कुरा थाह नपाई अन्याय मान्नुपर्ने कारण कम देख्छु। गायिका विष्ण माझिलाई गीत गाउनको लागि ४० हजार तिरेर पनि सर्जक र लगानी कर्ताले उनको मुख देख्न पाऊँदैनन् १ यो कुरा सुन्दा अच्चम्म लाग्ला ।
आखिर सत्य यहि हो । स्टुडियोमा गायिका विष्णु आईपुगेको खण्डमा रेकर्डिङ भित्र गीतको सम्बन्धित बाहेक अरु कोही बस्न पाउँदैन । त्यति मात्रै होईन रेर्कडिस्टले समेत विष्णुलाई देख्न पाउँदैनन् । स्टुडियोको सिसामा कालो पर्दा हालिन्छ अनिमात्रै गाउन लगाईन्छ । स्टुडियोमा पर्दाभित्र गीत गाउँदै…
मैले गायिका विष्णु माझिलाई बबरमहल स्थित प्रिज्म रेर्कडिङ स्टुडियोमा आजभन्दा दुईवर्ष पहिले देखेको थियो । हुलिया छोपिएको थियो उनको अनुहार । स्टुडियोमा भएका सबैलाई तल्लो तलामा झर्न भनियो हामीले भनेझै गर्यौंं।
तर आजका दिनसम्म पनि, लोकतान्त्रिक व्यबस्थामा पनि गायिका विष्णु माझि किन नजर बन्दमा छन् रु किन बाहिर आउन मान्दैनन् ? साच्चै उनका श्रीमानले यस्तो अपराध गरेका हुन त ? के एउटा नारीलाई गीत गाउदा पनि कालो पर्दा हालेर गाउन लगाउनु अन्याय र अपराध होईन ? यो सिरिया होकि नेपाल ? यदि नेपाल हो भने यस्तो जनावर प्रवृतिलाई किन प्रसय दिइराखेका छौँ ? किन सरकारले यसको बारेमा सोधि खोजि गर्दैन ?
कुनै प्रलोभन बिना यस्तो गैर जिम्मेवारपूर्ण काम गर्ने सुन्दरमणी स्वयम एक राम्रा सर्जकको हैसियतमा चिनिएका मान्छे हुन । उनीबाट यो कसरी सम्भव भयो ? उनले यो गल्ति कसको आडमा, किन र के को लोभमा गरिहरको छन् ?
उनीले यस्तो अपराध गर्न पाउछन् या पाउदैनन ? श्रीमति भन्दैमा यसरी स्टुडियोमा समेत कालो पर्दा हालेर गाउन लगाउनु अधिकारीको रहर होकी बाध्यता ? यसकाबारेमा यस क्षेत्रका हस्तिहरुले आवाज उठाउनु पर्छ कि पर्दैन ? कि डराउँदै छन् सुन्दरमणीबाट ?
यति विध्न हुँदा हुँदै पनि सर्जक तथा लगानी कर्ताले किन रोज्छन् विष्णु माझिलाई ? एक महिना, दुई महिनासम्म चल्ने गीतको लागि खाडिको घाममा जीवन र जवानीसँग साटेरे कमाएको ४० हजार किन तिर्छन ? यो झन गम्भिर भुल हो । यदि विष्णुलाई सार्वजनिक भएको देख्नु छ भने गीत बहिस्कार गर्नुपर्छ। गीत दिनु हुँदैन । ४० हजार विष्णुले पाउने होईनन् । सुन्दरमणीले पाउने हुन ।
त्यो रकम उनले न्यायोचित भन्दा पर गएर प्रयोग गर्ने गरेको गाईगुई सुनिदैछ। उनको बारेमा जुनसुकै कलाकारलाई सोध्ने हो भने, उहाँहरुको आन्तरिक मामला हो मात्र भन्छन् । उनी एउटा राष्ट्रकै सम्पत्ति हुन तर उनलाई न कुनै सभा समारोहमा न त कुनै अरु गायिका जसरी वैदेशिक कार्यक्रममा देख्न पाइन्छ । यो नजर बन्द नै हो ।
यस्तो गैर जिम्मेवार पूर्ण काम गर्ने सुन्दरमणीलाई हामीले किन सुन्दरमणी भन्ने रु कुरुपमणी भनौ । दुईटैलाई सामाजिक बहिष्कार गरौँ । नभए अर्को वर्ष ५० हजार विष्णुले पर्दा भित्रबाटै गाउने दिन दोहोरिने छन् ।
नोटः यो सामग्री २०७४ भदौ २९ गते पहिलो पटक प्रकाशित गरिएको थियो ।
२०७५ पुष २१ गते सम्पादित l १२:२७